मोदीको सपथग्रहणमा सहभागी हुन ओली बिहीबार दिल्ली प्रस्थान ! « Np Online TV
मोदीको सपथग्रहणमा सहभागी हुन ओली बिहीबार दिल्ली प्रस्थान !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुनुहुने भएको छ । भारतबाट सोमबार औपचारिक निम्ता आएपछि प्रधानमन्त्री ओली सपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन बिहीबार दिल्ली जान लाग्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री मोदीबीच जेठ १७ गते शुक्रबार द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार नै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रलगायत अन्य देशको सरकार प्रमुखको सहभागिता रहने भएको छ । मे ३० (जेठ १६) मा प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको रुपमा दोस्रो कार्यकालका लागि सपथ लिँदैछन् ।
बिमस्टेकमा भारत लगायत दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरु सहभागी रहेका छन् । यस संगठनमा ७ देशको प्रतिनिधित्व रहेको छ । जसमा भारत, नेपाल, बंगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, भुटान रहेका छन् ।
मोदीको सपथग्रहण समारोहमा सार्क मुलुकभित्रै पर्ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्सका सरकार प्रमुखलाई भने निम्ता नदिइएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।